Ukubala kwee-imali yedatha
Inani leebini zokurhweba
TAGZ Exchange i-crypto ntengiso 2 060 042 010 $ 1 1 1
EN i-crypto ntengiso 2 031 910 472 $ 1881 210 4016
BitMEX i-crypto ntengiso 1 063 398 250 $ 3 1 3
ExtStock i-crypto ntengiso 591 154 209 $ 9 5 24
Bybit i-crypto ntengiso 575 702 516 $ 3 2 4
Binance.KR i-crypto ntengiso 531 090 206 $ 2 3 5
BiteBTC i-crypto ntengiso 338 328 119 $ 7 4 12
BHEX i-crypto ntengiso 337 785 589 $ 8 3 17
55 Global Markets i-crypto ntengiso 197 314 618 $ 5 4 10
Phemex i-crypto ntengiso 192 304 207 $ 3 1 3
BW i-crypto ntengiso 160 612 719 $ 6 3 13
FCoin i-crypto ntengiso 156 806 877 $ 14 3 18
BITKER i-crypto ntengiso 149 388 422 $ 5 3 7
BTSE i-crypto ntengiso 146 101 348 $ 4 2 7
Deribit i-crypto ntengiso 79 144 670 $ 2 1 2
Huobi i-crypto ntengiso 27 055 259 $ 18 4 42
CEX i-crypto ntengiso 24 542 576 $ 6 3 11
Quoine i-crypto ntengiso 16 950 154 $ 4 9 18
BaseFEX i-crypto ntengiso 13 934 142 $ 4 3 6
Chaince i-crypto ntengiso 6 174 286 $ 3 2 3
Abucoins i-crypto ntengiso
BHEX i-crypto ntengiso
BITBOX i-crypto ntengiso
BITKER i-crypto ntengiso
BTSE i-crypto ntengiso
BW i-crypto ntengiso
BaseFEX i-crypto ntengiso
Binance.KR i-crypto ntengiso
BitFlip i-crypto ntengiso
BitMEX i-crypto ntengiso
BiteBTC i-crypto ntengiso
Bitpanda Global Exchange i-crypto ntengiso
Bitsane i-crypto ntengiso
BtcTrade.im i-crypto ntengiso
Buda i-crypto ntengiso
Bybit i-crypto ntengiso
Bytex i-crypto ntengiso
CEX i-crypto ntengiso
CODEX Exchange i-crypto ntengiso
Chaince i-crypto ntengiso
CoinEx Market i-crypto ntengiso
Coinhouse i-crypto ntengiso
Coinrail i-crypto ntengiso
CredoEx i-crypto ntengiso
Cryptohub i-crypto ntengiso
cfinex i-crypto ntengiso
Deribit i-crypto ntengiso
EN i-crypto ntengiso
EtherDelta i-crypto ntengiso
ExtStock i-crypto ntengiso
FCoin i-crypto ntengiso
fex i-crypto ntengiso
GBX Digital Asset Exchange i-crypto ntengiso
Huobi i-crypto ntengiso
Huobi (HBUS) i-crypto ntengiso
Instant Bitex i-crypto ntengiso
Koineks i-crypto ntengiso
MBAex i-crypto ntengiso
OKCoin i-crypto ntengiso
Octaex i-crypto ntengiso
OpenLedger DEX i-crypto ntengiso
Phemex i-crypto ntengiso
QBTC i-crypto ntengiso
Qryptos i-crypto ntengiso
Quoine i-crypto ntengiso
STEX i-crypto ntengiso
Stellarport i-crypto ntengiso
TAGZ Exchange i-crypto ntengiso
TDAX i-crypto ntengiso
Tokocrypto i-crypto ntengiso
Trade Satoshi i-crypto ntengiso
WEX i-crypto ntengiso
Waves Decentralized Exchange i-crypto ntengiso
xBTCe i-crypto ntengiso
55 Global Markets i-crypto ntengiso
Iimarike ze-Cryptocur lwemali zitshintshiselana kurhwebo lweemali zedijithali okanye i-imali yedatha. Iimarike ze-Crypto zihlala zifundisa i-imali yedatha, nangona zikwazi ukuthengisa kwiimali ezinkulu.
Iitshintshiselwano zeCryptocur lwemali zorhwebo zidayiswa ngababini: I-crypto ukuya kwi-crypto okanye kwi-crypto kwiimali eziqhelekileyo. Ukufumanisa ixabiso lokuthenga / lokuthengisa kwisibini ngasinye sokurhweba, ixabiso lentengiselwano litolikwa kwiidola.
Utshintshiselwano nge-Crypto ineempawu eziphambili:
Isixa semali ye-imali yedatha
Isixa semali sezemali
Isixa esilixabiso lezorhwebo
Ixabiso lokushintshiselana ngexabiso le-Cryptocur lwemali-iyonke iyonke kwiidola zokuthengiselana ngababini ixesha lokurhweba. Njengomthetho, umthamo wokurhweba ngokutshintshiselana nge-crypto uqikelelwa ngosuku.
Isixa see-imali yedatha kwiimarike zotshintshiselwano lwe-cryptocur lwemali lilonke inani lee-imali yedatha ezahlukeneyo ezithe zathengiswa kolu tshintshiselwano kumaxesha akutshanje. Ubungakanani be-imali yedatha yokushintshiselana nge-imali yedatha ibonakalisa ubumbeko bayo ngokurhweba ngokuthe ngqo kunye ne-imali yedatha yakho, inani labathengi abanokubakho kunye nabathengisi kolu tshintshiselwano lwe-crypto.
Inani leemali - iintlobo zizonke zeemali zodidi oluphezulu ezithe kuthengiswa okanye kuthengwe ngazo i-crypto nganye. Njengomthetho, i-imali yedatha ithengiswa kwiidola.
Inani lezi zibini zorhwebo lwe-crypto-exchange linani leentengiselwano ezigqityiweyo kule makethi ye-crypto ngosuku. Ubuninzi benani lokuthengisa ngababini, okukhona kurhwebo ngakumbi kuyenzeka, abathengi ngakumbi, abathengisi be-crypto kolu tshintshiselwano.
Kwi-Cryptoratesxe.com, silanda lonke utshintshiselwano olusebenzayo lwe-crypto kwihlabathi kwaye babonise ukulinganisa kwabo kwezi mpawu.
Sikwabonelela ngolwazi oluneenkcukacha kwimarike nganye ye-crypto yasimahla kunye ne-Intanethi.
Ukuthengiswa kwe-Imali yedatha kuboniswa kwi-imali yedatha nganye:
Elona xabiso lihle lokuthengwa kwemali ye-imali yedatha.
Elona xabiso lihle lokuthengisa kwi-imali yedatha kwi-imali yedatha exchange.
Ixabiso le-Imali yedatha
Umgangatho wokutshintshiselana nge-crypto unikezelwa kwiwebhusayithi yethu yasimahla kwi-Intanethi.
Amanqanaba otshintshiselwano nge-crypto anokuqwalaselwa ngokweempawu ezahlukeneyo:
Ubuninzi be-imali yedatha
Ubuninzi bezibini zorhwebo
Sikubonisa itafile yokutshintshiselana ngetekhnoloji yokutshintsha kwemali ngenani lokurhweba.
Sikholelwa ukuba mkhulu umthamo wokurhweba, uphezulu umlinganiso wentengiso ye-crypto.
Nangona umlinganiso wotshintshiselwano lwe-crypto ungabalwa kokubini ngobungakanani bezibini zokurhweba kunye nenani le-imali yedatha ethengisiweyo.
I-Imali yedatha itshintshiselana ngaphakathi 2020 - itafile ye-intanethi kwi-cryptoratesxe.com iwebhusayithi yokutshintshiselana okuqhuba urhwebo lwe-imali yedatha esebenzayo kwi 2020.
Ukutshintshiselana nge-Crypto 2020 -inkonzo enolwazi lwangoku lonke oluvela kulo lonke uguquko olukhoyo kwihlabathi.
Sivuselela rhoqo ulwazi kutshintshiselwano nge-imali yedatha ye 2020, sinoluhlu kunye nemilinganiselo yokutshintshiselana nge-imali yedatha 2019, kwaye sinethemba lokuba siya kufumana umlinganiso wotshintshiselwano nge-imali yedatha 2021.
Landa ukutshintshiselana nge-crypto esebenzayo kwi-2020 kwiwebhusayithi yethu.
Olona tshintsho luhle lwe-imali yedatha, iimalike zeprokhethi yemali ephezulu.
Olona tshintsho lwee-crypto olugqibeleleyo kwihlabathi, kwiimarike eziphezulu ze-crypto - kwinkonzo yethu online kunye yasimahla.
Itheyibhile yezona ndlela zibalaseleyo zokutshintshiselana nge-crypto ziboniswe kweli phepha, lihlelwe ngumthamo wezorhwebo.
I-TOP 20 yeentengiso ze-imali yedatha ezilungileyo malunga nexabiso lokuthengisa liqwalaselwa nathi kwi-Intanethi, imihla ngemihla kunye nexesha elivaliweyo.
Olona tshintsho lwabiwo mali luhle kakhulu namhlanje , Iimarike ezi-5 eziphezulu:
TAGZ-Exchange i-crypto ntengiso
Binance-KR i-crypto ntengiso
55-Global-Markets i-crypto ntengiso
Eyona nto iphambili ekutshintshisaneni ngee-imali yedatha inokudityaniswa ngenani lee-imali yedatha kunye nenani leeperi zorhwebo kuthengiselwano ngalunye.